देश गरीव छैन, नेता लुटाह छन्
नेपालम युरेनियम छ, तामा छ । पेट्रोल पनि छ । उच्च स्तरीय खालको युरेनियम भएकैले आणविक राष्ट्रहरुको चासो नेपालमाथि छ । चुरो कुरो नेपाल भारत र चीनका वीचमा छ र दुबै मुलुकलाई कमजोर पार्न र आफ्नो विश्वशक्तिको हालीमुहाली कायम राख्न युरो अमेरिकनधुरी नेपाललाई रणनीतिक भूमिका रुपमा उपयोग गर्नका लागि पनि नेपाल विश्व राजनीतिको केन्द्रमा छ ।
नेकपाका एक सांसद थिए सोम पाण्डे । उनको टिमले अध्ययन गरेपछि पत्ता लाग्यो, नेपालमा पेट्रोलियमको खानी नै छ । उनको रिपोर्टमा भनिएको छ– विदेशीले दबाब दिएर उत्खनन गर्नै दिएनन् । विदेशीकै हस्तक्षेपका कारण उत्खनन कार्य ओझेलमा प¥यो । नेपालमका केही जिल्लामा पेट्रोलियमको राम्रो सम्भाबना छ, अन्य खनिज पनि छन् तर परनिर्भर बनाइराख्न छिमेकीले दबाब दिन्छ र उत्खनन गर्न रोकिन्छ । नेपाल यही स्थितिमा खनिज पदार्थ भएर पनि गरीव र कमजोर रहेको छ । बेरोजगारीको समस्या र समृद्धि ल्याउन नसकिएको हो । अर्थात उनले विदेशी हस्तक्षेप भने तर सिधै भारतले भन्न सकेनन् । भारतको कुन प्रकारको मानसिक दबाब छ नेपाली राजनीतिमा, यसको पछिल्लो उदाहरण हो यो । भारत जहिले पनि नेपालमाथि आफ्नो पकड कायम राख्न र नेपालको संरक्षक मै हुँ भन्ने देखाउनका लागि नेपालमाथि चक्रव्यूह चलाइरहन्छ ।
नेपालमा दुई तिहाइको सरकार छ, यो सरकारले नेपाललाई चाहिने गोली आफै उत्पादन गर्ने तैयारी के थालेको थियो, भारतले त्यसो नगर्न र आपूर्ति गरिदिने आश्वासन दिएर रोकेको छ । नेपाल आफूलाई चाहिने गोलीजस्ता सामान्य बस्तु उत्पादन गर्नसमेत भारतको नियन्त्रणमा छ भने दुई तिहाइको सरकारले स्वाधीनता र सार्र्वभौमिकताको धक्कु लगाउनु र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना देखाउनु हावादारी भएन र ? देश आत्मनिर्भर हुनेतिर केही गर्नै सक्दैन र भारत नेपाललाई भारतनिर्भर बनाइराख्न चाहन्छ भने यस्तो सरकारले सुशासन कसरी दिनसक्छ ?
प्रकृतिले सुन्दरता र प्राकृतिक साधनस्रोत यसरी कुट कुट भरिदिएको छ कि त्यतिमात्र सदुपयोग गर्न सके नेपाल समृद्ध बन्नसक्छ । नेपालमा हेर्न, घुम्न र रमाउन मान्छेलाई चाहिने सबैकुराले भरिपूर्ण पारिदिएको छ प्रकृतिले । छैन त इमान छैन, नैतिकता छैन । इजरायली विद्वानले समेत इमान र नैतिकता हुने हो भने नेपाल स्वर्ग बन्नसक्छ भनेर गएका थिए । तर दुर्भाग्य नयाँ नेपाल बनाउँछु भनेर आएका ओलीसमेत फ्रान्सका लुई चौधौंले भैmं म नै स्टेट भन्न थालेका छन् ।